Banyere Anyị - Yangzhou Jetway Tourism Co., Ltd
Hotel eji enyere ndụ aka Nịm
akpụkpọ ụkwụ na-enwu
Guzosie Ike ke 2001, anyị ụlọ ọrụ dị na Yangzhou, Jiangsu Province, China. Anyị na ngwaahịa dị iche iche sitere na site naa Ngwa, ime Ngwa ka ịchọ mma Ngwa, wdg Mgbe 16years mmepe, anyị kwa afọ ntụgharị ahuroku 12 nde dollar. E wezụga, na-enye gị ihe kasị mma ahịa ọrụ na kediegwu ngwaahịa, anyị na-enye gị ọkachamara mmepụta usoro, ike akara nke akụrụngwa, Complete àgwà akara usoro dị ka nke ọma dị ka ndị dị ike manufactory ikike.
Dị na hotel amenity n'obodo, anyị factory ekpuchi a ngụkọta nke ebe 6000 square mita, gụnyere 6 noo, nkwakọba na 12 mmepụta e. Anyị ụlọ ọrụ ọkọnọ ike esịmde 20 nde tent kwa ọnwa. 150 ahụmahụ ọrụ na anyị àgwà akara otu nwere ike hụ na mmepụta nke kacha mma mma.
Firstly, anyị nwere ọkachamara QC otu ịchịkwa mmepụta. Nke abuo, anyị nwere nile zuru ezu ihe ndekọ nke nonconformity ngwaahịa. N'ikpeazụ, Anyị na-eme na-edebe mkpa codes omume & iwu si n'aka gomenti.
Nha, ụdị & na agba nwere ike ịtụ. Ị nwere ike izipu anyị gị zuru ezu achọ na anyị ga-enwe obi ụtọ iji kwadebe onye e kwuru maka gị ngwaahịa n'elu nnata nke ozi gị. Ozugbo gị selections e mere, anyị pụrụ iche na ngwaahịa ndụmọdụ otu otu ga-arụ ọrụ gị graphic mkpa nhọrọ na a nnyefe oge.
Professional imewe otu
Professional otu agụnye mmebe na oru pesonel. Anyị otu nwere ike chepụta dị iche iche ngwaahịa dị ka kwa gị echiche.
Ahịa anyị tumadi-abịa na-etolite America, Europe, Asia n'etiti-upscale ahịa. Na anyị exported karịa 70 mba na mpaghara.
The nchịkọta nke ngwaahịa nwere kaadiboodu igbe, egweri akwụkwọ igbe, Eco-enyi na enyi akpa, Pee akpa, corrugated akwụkwọ, eyi film, ọnya kaadị. Na niile nchịkọta 'agba, size, logo-ebi akwụkwọ nwere ike mere dị ka ahịa na-arịọ.
Kwa Afọ Party 2017
Nịm Up anyị New Branch Na Beijing